काठमाडौंले पर्खिरहेको मेयर बालेन शाह :: सुदीप श्रेष्ठ :: Setopati
हामीले देखेको तर बुझ्न बाँकी अति आत्मविश्वासी तर अधीर बालेन
एजे होम्स घुमन्ते पर्यटकहरू बस्ने 'बेड एन्ड ब्रेकफास्ट' होटल हो। बाहिर सानो क्याफे छ। हामी पुग्दा क्याफेमा कोही थिएन। पर्यटक पनि कोही देखिएनन्।
'यो के तपाईंहरू बस्ने होटल हो?' हामीले सोध्यौं।
'होइन, हामी यहाँ रेस्ट गर्न आउँछौं,' कुमारले भने, 'चुनावको दौडादौडमा आराम गर्न सजिलो हुन्छ।'
उनले त्यसैमा जोडेर भने, 'कसैले टाइम माग्यो भने भेटघाट गर्न पनि सजिलो भयो। नभए कहाँ भेट्ने, कहाँ बसेर कुरा गर्ने, साह्रै झन्झट हुन्छ।'
हामीले उनलाई तपाईंहरूको कोर टिममा को–को छ भनेर सोध्यौं। कुमारको जवाफ थियो, 'हाम्रो कोर टिम भन्नु नै हामी दुई जना, बालेन र म।'
कुमारले कसैलाई फोन गरे, 'उहाँहरू आइसक्नुभयो।'
लाइन काटेपछि हामीतिर हेर्दै भने, 'ऊ (बालेन) माथि छ, आइहाल्छ।'
काठमाडौं महानगरका 'मेयर इन वेटिङ' बालेन शाह भित्र छिरे, हलुकासँग हात मिलाए र हाम्रो सामुन्नेको सोफामा बसे।
बालेनले असजिलो मानेझैं गरे र भने, 'आज रेकर्ड नगरौं। आज त तपाईंहरूसँग एकछिन भेटघाट मात्र गर्न खोजेको। आज मलाई सन्चो छैन। हिजो खानपिन बिग्रेछ, फुड प्वाइजनिङ भयो। जीउ पूरै गलेको छ। राम्ररी कुरा गर्न सक्दिनँ।'
'निद्रा नपुगेर हो कि?'
'त्यो पनि होला तर खानपिन बिग्रेरै हो,' उनले छोटो उत्तर दिए।
जवाफमा उनले यत्ति भने, 'म नरदेवीमा जन्मेँ, त्यहीँ हुर्केँ। त्यति बेला मैले देखेको काठमाडौं अहिले पनि मेरो सम्झनामा झल्झल्ती छ। म त्यस्तै काठमाडौं पुनर्जीवित भएको देख्न चाहन्छु।'
मैले आफ्नो मोबाइलमा एउटा तस्बिर खोलेँ र अलिकति जूम गरेर उनलाई देखाउँदै सोधेँ, 'यो ठाउँ चिन्नुहुन्छ?'
त्यसपछि मैले नै भनेँ, 'यो तपाईं पढेको पहिलो स्कुल हो। नरदेवीको जलजला माध्यमिक विद्यालय।'
बालेन शाहले सबभन्दा पहिला पढेको नरदेवीको जलजला माध्यमिक विद्यालय जाने बाटो। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
'ए तपाईं जानुभएको थियो,' बालेनले फेरि तस्बिर हेरे अनि भने, 'पूरै फेरिएछ। पहिले त अगाडि झ्याम्म झाडी थियो। घरहरू एउटै थिएनन्। बाहिर सडकबाटै स्कुल देखिन्थ्यो। अहिले त पूरै छेकिएछ।'
हामी त्यो परिकल्पनाको सुरूआत र उनको नरदेवी बसाइबारे थप कुरा सोध्न चाहन्थ्यौं। तर उनले 'फुड प्वाइजनिङ' को कारण देखाउँदै कुराकानी लम्ब्याउन चाहेनन्।
बालेन गइसकेपछि कुमारले भने, 'भोलि फेरि समय मिलाउँला। आज उसलाई सन्चो छैन।'
'हाम्रो सुरूदेखि नै राम्रो जम्यो। एकअर्काका परिपूरकजस्ता भयौं,' कुमारले सुनाए।
'ऊ लोकल मान्छे हो। त्यसैले काठमाडौंलाई माया गर्छ। यहाँका गल्लीहरू घुम्न, जात्रापर्व मनाउन र यहाँका नेवार परिकारहरू खान एकदमै रूचाउँछ। ऊ फुर्सदमा काठमाडौं र पाटनका गल्लीहरू घुमेर ह्याङआउट गर्न मन पराउँछ।'
'उहाँमा राजनीतिक झुकाव चाहिँ कहिलेबाट कसरी आयो होला?'
'धेरै पुरानो कुरा त मलाई पनि थाहा छैन,' कुमारले भने, 'मैले भेट्दादेखि नै उसमा राजनीतिक प्रणालीप्रति असन्तुष्टि थियो। ऊ सिस्टममा फैलिएको भ्रष्टाचार, नेताहरूको गुटतन्त्र र नातावादले चिढिन्थ्यो। त्यही भुटभुटी गीतको माध्यमबाट व्यक्त गर्थ्यो।'
'तपाईंहरूले बालेनको र्‍याप सुन्नुभएको छ?' उनले बोल्दाबोल्दै हामीलाई प्रश्न गरे।
'केही सुनेको छु,' मैले भनेँ।
'उसो भए तपाईंहरूले थाहा पाउनुभयो होला, ऊ अरूजस्तो मनोरञ्जनको गीत मात्र गाउँदैन। उसका गीतहरूमा मायाप्रेम र रमाइलो भाव एकदमै कम हुन्छ। उसको र्‍याप भनेकै सिस्टमप्रतिको असन्तुष्टि र विद्रोहको अभिव्यक्ति हो।'
उनले अगाडि भने, 'उसको त्यो असन्तुष्टि अनौपचारिक कुराकानीहरूमा पनि व्यक्त हुन्थ्यो।'
'कसरी?' मैले सोधेँ, 'के भन्नुहुन्थ्यो उहाँ?'
'राजनीतिको गुटतन्त्र देखेर ऊ एकदमै फ्रस्ट्रेट थियो। नेताहरू स्वार्थमा भुल्दा हुनसक्ने काम पनि आलटाल भइरहेको र देश विकास हुन नसकेको कुरा गर्थ्यो।'
चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त भ्रष्टाचारविरूद्ध डा. गोविन्द केसीले सुरू गरेको आन्दोलन क्रममा उनले धेरैचोटि माइतीघरको प्रदर्शनमा भाग लिए। राजनीतिक दलहरूको खिचातानीले संविधान जारी गर्न ढिलाइ भएपछि प्लेकार्ड बोकेर सडकमा निस्किए। नेपाल बन्द र चक्का जाम हुँदा उनी चिढिन्थे र त्यसको विरोध गर्थे।
'भुइँचालोपछि त उसले आफ्नो र्‍याप करिअर चटक्कै माया मारेर ४०–४५ वटा जिल्लामा बसेर काम गर्‍यो,' कुमारले भने, 'त्यो बेला बालेन कहाँ हरायो भनेर उसका धेरै प्रशंसकले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन्। समाचार लेखिएका छन्।'
'मेयरको चुनावमै उठ्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट कसरी सुरू भयो?'
जवाफमा कुमारले भने, 'भुइँचालो पुनर्निर्माणमा काम गर्दा उसले सिस्टमलाई नजिकबाट चिन्ने मौका पायो। असन्तुष्टि त पहिलेदेखि नै थियो, सँगसँगै काम गर्न थालेपछि उसले यो सिस्टम कसरी विकृत भइसकेको रहेछ र त्यसलाई छिट्टै सुधार गरिएन भने हाम्रो देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन भन्ने बुझ्यो।'
'हामीले बाहिरबाट सोध्ने प्रश्नलाई सिस्टमले एक कानले सुन्छ, अर्को कानले उडाइदिन्छ। हामी कराएका करायै हुन्छौं, देश झन् झन् पछाडि धकेलिँदै जान्छ। भित्रै घुसेर हल्लाउन सके मात्र जड सिस्टमले गति समात्छ,' बालेनमा आएको राजनीतिक चेतबारे बुझाउँदै कुमारले भने।
त्यसैबीच उनले आजभन्दा पाँच वर्षअघि, २०७४ वैशाख ३१ गते, स्थानीय निर्वाचनकै दिन आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए– 'मैले आज भोट हालिनँ। म उम्मेदवार पनि छैन। मैले सिभिल इञ्जिनियरिङमा स्नातक गरेको छु र स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्दैछु। देश कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यसैले म अर्कोचोटि भोट हाल्नेछु र आफैंलाई हाल्नेछु। म मेरो देश आफैं विकास गर्छु। मलाई अरू कसैको भर लाग्दैन।'
बालेन शाह। तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटी
'बालेन चुनावमा उठेपछि र म पनि सँगसँगै लागेपछि मेरो बुवाको त्यति पुरानो राजनीतिक विरासत पनि जोडिन पुग्छ। चुनाव बेला उम्मेदवारहरूको अतीतलाई हरकिसिमले खोतल्ने प्रयास गरिन्छ। झन् स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई त दलहरूले चौतर्फी आक्रमण गर्न कुनै कसर छाड्दैनन्। यस्तोमा बालेनको अतीतको कुरा पनि उठ्छ। ऊ कुनै पुरानो घटनामा जोडिएको छ भने खोतलखातल पारेर बाहिर निकालिन्छ। त्यसैले म त्यसबारे जान्न चाहन्थेँ, ताकि भोलि चुनावको मैदानमा हिँडिसकेपछि मलाई कुनै किसिमको सरप्राइज नहोस्। उसको नाम जोगाउँदै हिँड्नुपर्ने नौबत नआओस्,' कुमारले भने।
पहिलो प्रश्नको जवाफमा बालेनले भने, 'मेरो कुनै त्यस्तो रहस्यमयी अतीत छैन। म कुनै पनि काण्डमा संलग्न छैन।'
दोस्रो प्रश्न बालेनको आर्थिक क्षमतासँग सम्बन्धित थियो। त्यसमा उनले भने, 'म त्यतिविधि धनी मान्छे त होइन तर पछिल्लो पाँच–सात वर्षमा इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी र गीत गाएर चौध–पन्ध्र लाख रूपैयाँ जम्मा गरेको छु। चुनाव आउन अझै पाँच महिना बाँकी छ। यसबीच म अरू शोहरू गर्न सक्छु। कलेजहरूमा बोल्न बोलाइरहेका हुन्छन्। त्यहाँ पनि जान सक्छु। सबै गरेर थप चौध–पन्ध्र लाख कमाउन सक्छु।'
'बालेनले मोटामोटी तीस लाख रूपैयाँ बन्दोबस्त गर्न सक्ने हिसाब निकाल्यो,' कुमारले भने, 'यति भए पर्याप्त हुन्छ भनेर हामी चुनावी अभियानमा जुट्यौं।'
'हाम्रो अहिलेसम्मको जम्माजम्मी खर्च साढे चार लाख हो,' उनले आफ्नो औंला भाँच्दै खर्च विवरण सुनाए, 'डेढ लाख फ्लेक्समा खर्च भयो। डेढ लाखको टिसर्ट बनायौं। एक लाख जति पर्चा, पम्प्लेटमा गयो। त्यसबाहेक अहिलेसम्म चुनावी अभियानमा हिँड्दा र साथीभाइलाई खाजा खुवाउँदा ५०–६० हजार खर्च भयो होला। त्यत्ति हो।'
'तपाईंहरूले वेबसाइटबाट पनि चन्दा संकलन गर्नुभएको थियो नि?' हामीले सोध्यौं।
'सुरूमा गरेको हो। त्यसबाट तीन–चार लाख जम्मा भएको थियो। पछि हामीले चन्दा लिन बन्द गर्‍यौं,' उनले जवाफ दिए।
'त्यसरी पैसा लिँदा भोलि कुनै न कुनै रूपमा पैसा दिनेहरूको स्वार्थ जोडिएर आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्यो,' कुमारले भने, 'पैसा दिनेहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्‍यो। उनीहरूले हामीबाट केही आश राखेका हुन सक्छन्। त्यो आश सामाजिक भए त केही भएन तर उनीहरूको व्यक्तिगत आश रहेछ भने त्यो नै भविष्यमा हाम्रो निम्ति भार हुने भयो।'
चन्दा लिँदाको बेफाइदा बुझाउन उनले एउटा उदाहरण पनि दिए, 'एक जनाले हामीलाई ८० हजार रूपैयाँ दिएका थिए। अहिले उनले दिनको तीनपटक मेरो पैसा कसरी खर्च भयो, कहाँ खर्च भयो भनेर सोधिरहन्छन्। हामी उनको खर्चको हिसाब दिँदै बस्ने कि आफ्नो काम गर्ने?'
'हाम्रो टिम सानो छ। कोर टिम भनेकै हामी दुई जना हौं— बालेन र म। अरू साथीहरू त बालेनको भिजनबाट आकर्षित भएर स्वतस्फुर्त जोडिँदै गएका हुन्,' कुमारले भने, 'बरू हामीसँग नारा लगाउँदै हिँड्ने मान्छे नहोस्, मतदानको बुथमा बस्ने प्रतिनिधि नहोस्, तर धेरै मान्छे पछि नलगाउने हामीले निधो गरेका थियौं। हाम्रा दलका नेताहरूले सयौं कार्यकर्ता पछि लगाउँछन्। ती कार्यकर्ता खुसी राख्न भोलि आफू पदमा पुगेपछि उनीहरूको केही न केही काम गरिदिनुपर्छ। ती काममा देशको स्वार्थभन्दा मान्छेको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुन्छ। त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने बालेनको विचार थियो। मलाई पनि ठिक लाग्यो। मेरो बुवा पनि एक्लै चुनावमा होमिनु हुन्थ्यो, कोही उहाँको साथ होस् कि नहोस्।'
उनले अगाडि भने, 'सबैको चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने छुट्टै अफिस हुन्छ। बालेनको त त्यो पनि थिएन। साथीहरूले धेरै कर गरेपछि दस–पन्ध्र दिनअघि मात्र हामीले मध्यबानेश्वरमा एउटा फ्ल्याट लिएर सम्पर्क कार्यालय खोलेका थियौं। त्यो ठाउँ पनि साथीहरू जम्मा हुने थलो मात्र हो। हामी त्यहाँ विरलै पुग्छौं।'
'त्यसो भए चुनाव प्रचार कसरी भयो त?' हामीले सोध्यौं।
'हामी पाँच महिना अगाडिदेखि नै दिनको डेढ–दुई सय मान्छे भेट्थ्यौं। पाँच महिनामा तीस हजार मान्छेलाई प्रत्यक्ष भेट्यौं होला,' उनले भने, 'कहिले कुन टोलमा पुग्थ्यौं, कहिले कुन चिया पसलमा जान्थ्यौं। त्यहाँ बसेर स्थानीय युवाहरूसँग घन्टौं कुराकानी गर्थ्यौं। बालेन ती युवाहरूलाई आफ्नो भिजन सम्झाउँथ्यो।'
उनले अगाडि भने, 'बालेन र्‍याप गायक भएकाले युवा पंक्तिमा त्यसै पनि लोकप्रिय थियो। ऊ आफैं गफ गर्न अघि सरेपछि युवाहरू उसको कुरा सुन्न झुम्मिन्थे। यसबाट हामीलाई काठमाडौंको स्थानीय समुदाय, खासगरी युवा पंक्तिमा आफ्नो कुरा पुर्‍याउन सजिलो भयो।'
काठमाडौंका टोल–टोलमा गएर भेटघाट गर्दा बालेन र कुमारले यहाँका मतदाता मात्र छानेनन्। जो भेटिन्छ, उसैलाई आफ्नो योजना सुनाए। तीमध्ये कोही काठमाडौं बाहिरका पनि थिए जो यहाँ डेरामा बस्थे। त्यस्ता व्यक्तिले बालेनका कुरा सुनेर भने, 'दाइ हामीले त तपाईंलाई भोट हाल्न मिल्दैन तर हामी आफ्नो घरबेटीलाई यसपालि तपाईंलाई नै भोट दिनुस् है भनेर सम्झाउँछौं।'
कोही पहिलोचोटि भोट हाल्न लागेका युवाहरू थिए जो बालेनका कुरा सुनेर भन्थे, 'दाइ हाम्रो भोट तपाईंलाई नै हो। हामी सकेसम्म आमाबुवा, दाइदिदीलाई पनि तपाईंलाई नै भोट हाल्नुस् भनेर सम्झाउँछौं।'
मतदानको दिन पकनाजोलको नेपाल युवक माविमा भोट हाल्न आएका एक युवाले हामीलाई भनेका थिए, 'मलाई अरू नेताहरूप्रति भरोसा छैन। बालेन शाहको कुरा सुनेर मात्र यो वर्ष विदेश नगएको। बालेन शाहले जितेन भने म नेपालमा बस्दिनँ।'
'यसले बालेनको चर्चालाई काठमाडौंका घरघरमा, मान्छेका हातहातमा पुर्‍यायो। यो हाम्रो निम्ति प्लस प्वाइन्ट भयो,' कुमारले भने, 'हामी कसैसँग पनि सिधै बालेनलाई भोट हाल्नुस् भनेर भन्दैन थियौं। ऊ आफ्नो योजना सुनाउँथ्यो, मान्छेहरू उसको त्यही योजना सुनेर आकर्षित हुन्थे।'
'हामी आफैंले बालेन शाहलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेर भेट्न गएका हौं,' बन्जाराले भने, 'सुरूमा त उहाँले विश्वास गर्नु भएन होला। तर हामीले काम गरेर देखाएपछि र धेरै दिन उहाँसँगै हिँड्न थालेपछि अहिले एउटै टिमका रूपमा छौं।'
'हामीले समाजका प्रबुद्ध वर्गलाई बालेन शाहको पक्षमा बोल्न अनुरोध गर्‍यौं,' उनले भने, 'लगातार मान्छे जुटाउँदै, सम्झाउँदै, बुझाउँदै गरेपछि चुनावको दुई दिनअघि बालाजु क्षेत्रमा करिब पाँच सय जनाको र्‍याली निकाल्न सफल भएका थियौं।'
यीमध्ये अभिनेता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेतसँग बालेनका बारेमा सोध्दा उनले भने, 'मैले उनलाई र्‍यापरका रूपमा चिनेको हुँ। उनी र्‍याप ब्याटलमा सहभागी हुँदादेखि नै हामी कुराकानी गर्थ्यौं। उनी गीतका माध्यमबाट सामाजिक बेथिति उजागर गर्छन् र परिवर्तनको सन्देश दिन्छन्।'
उनले अगाडि भने, 'धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो असन्तुष्टि पोखेर मात्र बस्छन्। निकै कम यस्ता हुन्छन् जो त्यसको समाधान म दिन्छु भनेर अगाडि सर्छन्। बालेन तिनैमध्ये एक हुन्। यसरी कोही आफ्नो नियमित काम छाडेर परिवर्तनको निम्ति अगाडि सर्छ भने उसलाई साथ दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि साथ नदिनु भनेको हामी आफैंमा केही समस्या छ भन्ने संकेत हो।'
'हामी सबै सिस्टमबाट असन्तुष्ट छौं। आधारभूत सेवा पनि नपाउने अवस्थाले दिक्क छौं। बालेनले त्यो सिस्टम सुधार्ने योजना ल्याएका छन्। मेरो समर्थन उनको त्यही योजनामा हो,' निश्चलले भने, 'भोलि फेरि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने म फेसबुकमा लेखेर होइन, उनलाई व्यक्तिगत रूपमै भेटेर आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्नेछु।'
'त्यस दिन म बालेनलाई भन्नेछु, तिमीले गरेको काम ठिक भएन। के यसकै लागि हामीले तिमीलाई भोट हालेका हौं? उनलाई यतिसम्म भन्ने सुविधा मसँग छ भन्ने मलाई लाग्छ,' निश्चलले भने।
चुनावी दौडाहाकै क्रममा बालेनले पटकपटक कुमारका बुवा नरसिंह व्यञ्जनकारलाई पनि भेटे। उनी व्यञ्जनकारलाई आफ्नो 'राजनीतिक गुरू' मान्छन्। व्यञ्जनकारले कुन दलबाट को उम्मेदवार उठ्न सक्छन्, कसको सामर्थ्य के हो र कमजोरी के हो भनेर बालेनलाई बुझाएका थिए। उम्मेदवारी घोषणा भइसकेपछि उनीहरूले उठाउने प्रश्नमा कसरी जवाफ दिने भनेर तयार पनि गराए।
हुन पनि बालेनले चुनावभरि एक शब्द नमीठो बोलेनन्। नमीठो टिप्पणीमा पनि मीठो जवाफ फर्काए जसमा उनको व्यंग्य चेत मिसिएको हुन्थ्यो। ठाउँको ठाउँ जवाफ फर्काउने र्‍याप ब्याटलको अनुभवले सायद उनलाई धेरै सहयोग गर्‍यो। उनले नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहलाई 'आमा' भनेर सम्बोधन गरे, नेकपा एमालेका केशव स्थापितलाई 'बुवा' भने।
'उहाँ पेसाले स्ट्रक्चरल इञ्जिनियर हुनु हुँदो रहेछ। गीत पनि गाउनु हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ नामै सुनेको थिइनँ। साथीहरूले नै उहाँले भेट्न चाहनुभएको छ भनेर खबर ल्याएपछि मैले समय मिलाएँ,' बालेनसँगको भेट सम्झिँदै प्रजापतिले भने।
नगरपालिका र वडास्तरमा हुने भ्रष्टाचारबारे बालेनले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै प्रजापतिले भनेका थिए, 'भ्रष्टाचारविरूद्ध हामीले शून्य सहनशीलताको नीति लिएका छौं। भ्रष्टाचार भएको थाहा भयो भने ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छौं भनेर सबैलाई भनेका छौं। मेयरले आफू एक पैसा भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरू कसैले गरेको पनि सहन्नँ भनेर सन्देश दिने हो भने आधा समस्या त्यसै हल हुन्छ। त्यसपछिको आधा समस्या तपाईंको व्यक्तिगत कामकारबाहीमा भर पर्छ।'
उनले अगाडि भने, 'तपाईंले लप्पनछप्पनवाला योजना स्वीकार नगर्ने, त्यस्ता योजना ल्याउनेलाई नगरपालिकामा घुस्न पनि नदिने र त्यस्तो काम गर्न उक्साउने कर्मचारी र वडाध्यक्षहरूलाई सुरूदेखि नै निरुत्साहन गर्ने हो भने तपाईं पाँच वर्ष निर्धक्क काम गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईंको काममा कसैले अवरोध पुर्‍याउँदैन।'
भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापतिसँग बालेन शाह। तस्बिर: बालेन शाहको फेसबुकबाट
दुई घन्टा कुराकानी गरेको र उनका योजना सुनेको आधारमा बालेन 'दह्रो इच्छाशक्ति भएका मान्छे हुन्' भन्ने घिमिरेलाई लाग्छ।
भक्तपुर र तिलोत्तमाका वर्तमान र निवर्तमान नगरप्रमुखपछि हामीले बालेनलाई सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाबारे परामर्श दिने डा. सन्दुक रूइतसँग कुराकानी गर्‍यौं।
मनाङका गाउँमा आँखा शिविर सञ्चालन गर्न पुगेका डाक्टर रूइतले उतैबाट टेलिफोनमा भने, 'हामीले आमजनतामा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कसरी सहज बनाउने, कसरी बीमाको सुविधा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सेवामा रहेका अवरोधहरू कसरी हटाउने लगायत विषयमा छलफल गरेका थियौं।'
यसनिम्ति कुन स्तरको जनशक्ति चाहिन्छ र कुन स्तरको प्रयोगशाला विकास गर्नुपर्छ भन्नेबारे परामर्श भएको डा. रूइत बताउँछन्।
बालेन शाह तपाईंलाई कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'हामीकहाँ पैंचोको राजनीति धेरै भयो। केही लिएर पछि केही दिने राजनीतिमा देश रूमल्लिरह्यो। यो चक्र तोड्नु जरूरी छ। बालेन शाह जसरी तयारी गरेर राजनीतिमा आएका छन्, उनले थोरै भए पनि परिवर्तनको सुरूआत ल्याउँछन् भन्ने मलाई आशा छ।'
उनले अगाडि भने, 'काठमाडौंले सधैं परिवर्तनको नेतृत्व गर्छ। राजनीतिमा देखिएको यो परिवर्तन पनि भोलि देशैभरि अनुकरण हुनसक्छ। यसले यथास्थितिको राजनीतिमा ढ्यांग्रो ठोकेको छ।'
'उहाँले तपाईंसँग के के कुरामा जिज्ञासा राख्नुभयो त?' हामीले प्रश्न गर्‍यौं।
जवाफमा प्राध्यापक खनालले भनिन्, 'राजकुलो पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र खासगरी काठमाडौंका ढुंगेधाराहरूमा फेरि पहिलेजस्तै कलकल पानी आउने बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोध्नुभयो।'
'अनि तपाईंले के जवाफ दिनुभयो त?'
'राजकुलो त अब मरिसक्यो। पाटनको राजकुलो ब्युँताउन सकिन्छ, काठमाडौंको चाहिँ गाह्रो छ। पहिले बुढानिलकण्ठदेखि मध्य–काठमाडौंसम्म जुन बाटो हुँदै राजकुलो बग्थ्यो, अहिले त्यहाँ घना बस्ती छ। त्यो बस्ती उजाडेर राजकुलो पुनर्स्थापना गर्नु भनेको असम्भव कार्य हो,' उनले बालेनलाई भनेको कुरा हामीलाई सुनाइन्, 'जहाँसम्म ढुंगेधाराहरूको सवाल छ, ती पनि सबै पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्दैनन्। मैले बालेनजीले काठमाडौंमा कतिवटा ढुंगेधारा थिए, तीमध्ये कतिवटा मासिए र कति कुन रूपमा छन् भनेर विस्तार लगाएकी थिएँ। केही ढुंगेधारा ब्युँताउन सकिन्छ। यसको निम्ति वरिपरिका स्थानीय र खासगरी बूढाबूढीहरूसँग कुराकानी गरेर त्यो ढुंगेधारामा पानी आउने बाटो पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यो बाटो बन्द भएको छ भने स्थानीयकै सहयोगमा खोल्न सकिन्छ। ढुंगेधारामा पानी आउँदा उनीहरूकै दैनिक जीवन कसरी सहज हुन्छ भनेर बुझाउनुपर्छ।'
'काठमाडौंका ढुंगेधारा भनेका आजका संरचना होइनन्। धेरै मल्लकालीन छन्, कतिपय लिच्छविकालदेखिका पनि छन्। यसको महत्व भनेको पानीको आपूर्ति मात्र होइन। कुनै कालखण्डमा पानी आपूर्ति गर्न बनाइयो होला तर अहिलेको समय यी ढुंगेधारा हाम्रो प्राचीन र मध्यकालीन मूर्तिकला, वास्तुकला र पानी आपूर्ति प्रणाली बुझाउने सम्पदाहरू हुन्,' खनालले भनिन्, 'त्यसैले कलकल पानी बगाउन नसके पनि सम्पदा संरक्षणका हिसाबले यी ढुंगेधाराको सरसफाइ र व्यवस्थापन जरूरी छ।'
'उहाँ जुन रूपमा योजना बनाएर, विषयवस्तुहरू बुझेर आउनुभएको छ, त्यो हेर्दा राम्रो गर्न सक्नु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ,' प्राध्यापक खनालले भनिन्।
'यो पाँच महिनामा उसले काठमाडौंको बारेमा जति धेरै किताब पढ्यो, त्यति किताब यति कम समयमा सायदै कसैले पढेको थियो। जति धेरै मान्छेलाई भेटेर सूचना बटुल्यो, त्यति सूचना यति कम समयमा सायदै कसैले बटुलेको थियो,' उनले भने।
उनलाई एउटा अन्तर्वार्तामा जर्मनीका तानाशाह हिटलरलाई प्रश्न गर्न पाए के गर्नु हुन्छ भनेर सोधिएको थियो। जवाफमा बालेनले भनेका थिए, 'म हिटलरसँग सबै मान्छेलाई एउटै कुरा सोच्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सोध्नेछु।'
'तपाईंको राजनीतिक झुकाव कहिलेबाट सुरू भयो?' हामी समय खर्च नगरी सिधै विषयवस्तुमा हाम फाल्यौं।
'म नौ कक्षा पढ्दादेखि नै राजनीतिक रूपले सचेत थिएँ। त्यही राजनीतिक चेतनाले नै हिपहप संगीततिर आकर्षित भएको हुँ।'
उनले त्यसपछि संसारभरि कसरी विद्रोहको भाकाका रूपमा हिपहप संगीतको उदय भयो र यसले कसरी काला र गोराबीचको विभेदलाई र्‍याप शैलीमा उजागर गर्‍यो भनेर विस्तार लगाए, भने, 'हिपहप भनेकै क्रान्तिकारी गीत हो। यसमा कुनै न कुनै रूपले सामाजिक बेथितिविरूद्धको असन्तुष्टि लुकेको हुन्छ। हिपहप भनेकै राजनीतिक गीत हो। मैले यस्तो गीत गाउनु नै मेरो राजनीतिक झुकावको संकेत हो।'
उनले अगाडि भने, 'मैले आफ्नो राजनीतिक र सामाजिक चेतना अभिव्यक्त गर्न हिपहप संगीत रोजेँ। गीतको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणको वकालत गरेँ। मैले सिभिल इञ्जिनियरिङ गर्नु र पछि स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङमा स्नातक गर्नु पनि एक किसिमले भन्दा राजनीतिक क्षेत्रमा आउने तयारी नै थियो।'
'कसरी?' हामीले अझै खोतल्यौं।
'म राजनीतिलाई राजनीति भन्न रूचाउँदिनँ, विकास भन्न चाहन्छु। राजनीति गर्नु भनेको वास्तवमा भन्दा सिस्टमभित्र प्रवेश गरेर देश रूपान्तरणमा सरिक हुने एउटा ठूलो अभियानको हिस्सेदारी हो। त्यसैले राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेमा सबभन्दा पहिला देश विकास गर्छु भन्ने आत्मबोध हुनुपर्छ। यसको निम्ति विकास कसरी हुन्छ र विकासका च्यानलहरू के के हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।'
उनी भन्दै थिए, 'म गीतका माध्यमबाट समाजका बेथितिमाथि प्रश्न गर्दै थिएँ र सँगसँगै इञ्जिनियरका रूपमा देश विकासको प्रक्रियामा संलग्न हुँदै गएँ। यी दुवै कर्मले मलाई समाजसँग नजिक ल्यायो। बेथितिविरूद्ध वकालत गर्न सिकायो र विकासका विभिन्न चरणहरूको प्रत्यक्ष अनुभव गरायो। एक समयमा पुगेपछि मलाई बाहिरबाट गरिने वकालतले भन्दा सिस्टममै प्रवेश गरेँ भने देश विकासमा ठूलो योगदान गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो।'
'मैले स्कुल धेरैपटक फेरेँ। नरदेवीको जलजलामै तीनपटक भर्ना हुँदै निस्कँदै गरेँ। त्यहाँ ६ कक्षासम्म पढेँ,' उनले भने, 'एकै शैक्षिक वर्षमा तीनवटा स्कुलसम्म फेरेको रेकर्ड छ।'
सानै कक्षाको कुरा हो। विज्ञानका शिक्षकले पृथ्वी लगायत ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि लगातार घुमिरहेका हुन्छन् भनेर पढाए। बालेन छक्क परे। आफू बसेको धर्ती सधैं स्थिर देखिरहेका बालेनले शिक्षकको कुरा नपत्याएर सोधे, 'सर तपाईंले कसरी पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ भनेर भन्नुभयो। के तपाईंले आकाशमा उडेर पृथ्वीले सूर्यलाई घुमेको हेर्नुभएको हो? होइन भने यस्तो हावा कुरा कसरी भन्नुभयो?'
'मैले सोधेको प्रश्न अत्यन्तै सामान्य थियो। आज मैले त्यो कुरा बुझेको छु। ती शिक्षकले सही कुरा पढाएका थिए भन्ने मलाई आज थाहा छ। तर त्यति बेला त्यही कुरा उनले राम्ररी बुझाउन सकेनन्। उल्टो मेरो प्रश्नलाई पन्छाएर मेरो बाल जिज्ञासालाई नकारेँ,' बालेनले भने, 'यसले पढाइ-लेखाइप्रति नै मेरो रूचि घट्यो। म धेरैचोटि फेल भएँ। कहिलेकाहीँ त आठवटा विषयमध्ये पाँचवटामा फेल हुन्थेँ। पास हुँदा पनि बल्लतल्ल पास भएँ। विद्यार्थी फेल हुनु भनेको उसको असफलता होइन, उसको भन्दा बढी असफलता शिक्षकको हो। विद्यार्थी असफल हुनुमा सतप्रतिशत शिक्षकको दोष हुन्छ।'
'बच्चा कसरी जन्मिँदो रहेछ भन्ने कुरा हरेक बालकको मनमा आउँछ। मैले एकचोटि यही प्रश्न आमाबुवालाई सोधेको थिएँ। उहाँहरूले भगवानले आशीर्वाद दिएर जन्मिन्छ भन्नुभयो। मलाई पत्याएर लागेन। यस्तो हावादारी कुरा पनि गर्ने भनेँ,' बालेनले भने।
उनले अगाडि भने, 'प्रश्न सोधिएन भने चर्चा हुनुपर्ने गम्भीर विषयवस्तु पनि त्यसै दबिएर जान्छ। त्यसैले हामीले प्रश्नलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। वरपर जेजे चिज छन्, त्यसका बारेमा हामीलाई विस्तृत रूपमा थाहा हुनुपर्छ। यसको निम्ति मान्छेमा जिज्ञासा हुनु जरूरी छ। जिज्ञासाले नै प्रश्न जन्माउँछ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले भने जिज्ञासालाई बोधो बनाइरहेको छ, प्रश्नमा छेकबार लगाइरहेको छ।'
काठमाडौं महानगरभित्रका सामुदायिक स्कुलहरूको शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने उनको एजेन्डा छ। यसनिम्ति उनले शिक्षकहरूको तालिममा विशेष जोड दिएका छन्। पहिलेका अन्तर्वार्ताहरूमा उनले सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरूलाई कोरिया र जापानमा तालिम लिन पठाउने योजना सुनाएका थिए। यसपालि विदेशी प्रशिक्षकहरूलाई नै नेपाल डाकेर यहीँ तालिम दिने कुरा सुनाए।
'जबसम्म शिक्षक आफैं जिज्ञासु हुँदैन, जबसम्म शिक्षक आफैंले प्रश्न गर्न सिक्दैन तबसम्म विद्यार्थीहरूमा जिज्ञासा राख्ने र प्रश्न गर्ने चेत आउँदैन,' उनले भने।
कम उमेरमा बाइक हाँक्दाको अनुभव सुनाउँदा बालेन खुसी देखिएका थिए। मुसुमुसु हाँस्दै भने, 'पहिलोचोटि गाडी चलाउँदा म छ कक्षा पढ्थेँ। मलाई लाग्छ, छिमेकमा कसैसँग हेलिकप्टर भइदिएको भए म त्यो पनि उडाउन सिक्थेँ।'
'इञ्जिनियरिङ पढ्नुको अर्को कारण पनि छ,' उनले भने, 'म पहिले गणितमा कमजोर थिएँ। बायोलोजीमा ८७ ल्याउँदा गणितमा ४२ आउँथ्यो। तर जुन विषयमा म कमजोर थिएँ, पछि त्यही विषयलाई आफ्नो शक्तिमा बदलेँ। आउने विषय त के पढ्नू, नआउने विषय पो पढ्नुपर्छ भनेर गणितमा बेस्कन मिहिनेत गरेँ।'
भारतमा राम्रो नतिजा ल्याएको कुरालाई उनले फेरि शिक्षकसँग जोडे र भने, 'नेपालमा राम्रो शिक्षक नभएर नै बिई पढ्न कठिन भएको मैले भारत गएर थाहा पाएँ।'
यसरी लगातार स्कुल फेरिरहने जुन कारण उनले बताएका छन्, त्यो धेरै विश्वसनीय लाग्दैन। उनी आफू फेल हुनुमा यहाँका शिक्षकहरूले राम्ररी पढाउन नसक्नुलाई नै दोष दिन्छन्। विद्यार्थीको कमजोरीमा शिक्षकप्रति औंला उठाउँदै उनी भन्छन्, 'सतप्रतिशत दोष शिक्षकहरूकै हुन्छ। विद्यार्थीको दोष जिरो पर्सेन्ट पनि हुन्न।'
'मेरो सबभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै मेरो इमानदारी हो र विकासप्रतिको प्रण हो। म आफू इमानदार भएसम्म अरू कसैले मलाई गलाउन सक्दैन,' उनले बोले, 'अर्को ठूलो शक्ति भनेको मेरो इञ्जिनियरिङ पृष्ठभूमि हो र मैले लामो समयदेखि गर्दै आएको कन्सल्टेन्सी काम हो।'
उनले यसलाई थप विस्तार गर्दै भने, 'इञ्जिनियरका रूपमा कस्तो ठाउँमा कस्तो पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ। कुन योजना सम्भव छ र कुन असम्भव छ भन्ने पनि राम्ररी बुझ्छु। कुनै योजना असफल भयो भने त्यो प्राविधिक कारणले असफल भयो कि मानवीय त्रुटिले भन्ने पनि मलाई थाहा हुन्छ। कुनै सडक राम्रो बनेन वा पुल कमजोर भयो भने त्यसमा ठेकेदार र प्राविधिकहरूको बदमासी छ कि छैन भन्ने तुरून्तै थाहा पाउँछु। मलाई कसैले मूर्ख बनाउन सक्दैन। झुक्याउन सक्दैन।'
उनले अगाडि भने, 'महानगरको ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सिभिल इञ्जिनियरिङसँग जोडिएको हुन्छ। म आफैं इञ्जिनियर भएकाले ती सबै काम राम्ररी बुझ्छु। त्यसैले अहिले भइरहेका कम्तीमा ७० प्रतिशत काम म पूर्ण दक्षतासाथ गर्न सक्छु। त्यसमा मलाई कसैले अलमल्याउन सक्दैन।'
कुनै राजनीतिज्ञले म ८० हजार वा ९० हजार मत ल्याएर जित्छु भन्नु अस्वाभाविक होइन। तर जब कुनै राजनीतिज्ञले तोकेरै 'म ९० हजार ८ सय ३५ मत ल्याउँछु' भन्छ, उसले के आधारमा, किन त्यसो भनिरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसबारे सोध्दा बालेनका सहयात्री कुमारको भनाइ थियो, 'मान्छेलाई सधैं अंकमा रूचि हुन्छ। दुईतिहाइ बहुमत भन्यो भने धेरैले बुझ्दैनन्। यसको सट्टा यति मत ल्याउँछु भनेर सिधै अंक तोकेर भन्यो भने मान्छेलाई त्यही अंकले तान्छ।'
उनले सिधै भने, 'यो हाम्रो नम्बर गेम हो।'
बालेनको निम्ति यो 'नम्बर गेम' नै होला। तर यसले उनी कसरी आफूलाई ब्रान्डिङ गर्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ। जनतालाई आकर्षित गर्न उनीहरूको मनस्थितिसँग कसरी खेल्न सक्छन् भन्ने पनि बुझाउँछ।
कस्तो मनोविज्ञान भएको नेताले यसरी सार्वजनिक रूपमा ठ्याक्कै अंक तोकेर आफूले ल्याउने मत दाबी गर्न र त्यसलाई 'नम्बर गेम' भन्दै अर्थ्याउन जायज ठान्छ?
यसले उनी या त आफूलाई तिलस्मी ठान्छन् वा आफूलाई 'कन्फिडेन्ट' देखाउन खोज्छन् भनी मान्न सकिन्छ। दुवै अवस्थामा यो उनको सामान्य मनस्थिति होइन।
'बर्खामा हामीकहाँ जम्मा हुने फोहोरमैला भिजेको हुन्छ। त्यसलाई जलाउँदा तापक्रम हजार डिग्री सेल्सियसको आसपास हुनुपर्छ। तापक्रम ठ्याक्कै मिलाउन सकिएन भने स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषाक्त ग्यासहरू निस्कन्छन्,' उनले भने।
'भारतको प्राविधिक क्षमता हाम्रो दाँजोमा निकै सबल छ। तर उनीहरूले पनि आगोमा फोहोर जलाउने विधि सफल रूपमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। यो अवस्थामा हामीकहाँ हचुवा भरमा इन्सिनेरेटर प्रयोग गर्नु घातक हुनसक्छ,' तुलाधरले भने, 'हाम्रै अनुभवमा विगतमा टेकुमा प्रयोग गर्दा सफल हुन सकेको थिएन। हालसालै गोकर्णेश्वर, बनेपा लगायत केही नगरपालिकाहरूले यो विधि अपनाएका थिए तर समस्या आइरहेको छ।'
बालेन भने निकै आशावादी सुनिन्छन्। उनले अन्तर्वार्ताहरूमा भनेका छन्, 'हाम्रा नागरिकहरू एकदमै भनेको मान्छन्। गाडीको हर्न नबजाउनू भन्दा कसैले बजाएनन्। त्यस्ता मान्छेलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग राख्नू भन्यो भने पक्कै मान्छन्।'
'काठमाडौंको विशेषता भनेकै यहाँका जात्रापर्व, रहनसहन र भित्री बस्तीका गल्लीहरू हुन्। सयौं वर्षदेखिका यी सम्पदाले काठमाडौंको परिचय बोकेका छन्। नेपाल आउने पर्यटक यिनै सम्पदा हेर्न आउने हुन्। तर हामीले पर्यटकलाई काठमाडौंको अमूल्य रत्न देखाउन जानेका छैनौं। त्यसैले अधिकांश पर्यटकको काठमाडौं बसाइ एकदमै कम छ। यहाँका सम्पदा, संस्कृति संरक्षण गर्ने र संसारभरि त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने हो भने पर्यटनबाटै काठमाडौंले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ,' उनले भने।
यहीँका गल्लीमा हुर्केकाले आफूलाई ती गल्ली र यहाँका परम्परासँग मोह भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, 'मैले बच्चा बेला जुन काठमाडौं देखेँ, त्यो अहिलेका बच्चाहरूले देख्न पाएका छैनन्। काठमाडौंको अलग्गै बासना छ। यहाँका मन्दिरहरूमा हुने आरती, घन्टीको आवाज र जात्रापर्वको रौनकले काठमाडौंमा सधैं संगीत गुञ्जिरहेझैं लाग्छ। म अहिलेका केटाकेटीलाई आफू केटाकेटी हुँदा देखेको काठमाडौं देखाउन चाहन्छु। काठमाडौंको मौलिक बासनासँग संसारलाई परिचित गराउन चाहन्छु।'
'मन्दिर र सम्पदाको आफ्नै अर्थ हुन्छ। ठेकेदारले भाडाको श्रमिक ल्याएर काम गर्‍यो भने त्यो मर्म जीवित रहँदैन। यसनिम्ति यहीँको कलाशैली बुझेको कालिगढ चाहिन्छ। त्यसैले सम्पदाको काम जनसहभागिताबाटै हुनुपर्छ,' उनले भने।
सार्वजनिक यातायात काठमाडौंको अर्को मुख्य समस्या हो। थोत्रा गाडीमा कोचाकोच यात्रा गर्न जनता बाध्य छन्। यसलाई हल गर्न सबै सार्वजनिक गाडीलाई एउटा कम्पनी मातहत ल्याउने र त्यही कम्पनीले एउटै ब्रान्डका रूपमा गाडी चलाउने उनको विचार छ। यसो गर्दा प्रिपेड-कार्ड प्रणाली पनि लागू गर्न सकिन्छ। दैनिक, साता वा महिनावारी पैसा तिरेर एउटै कार्डले सहरभरि यात्रा गर्न सकिन्छ। महानगर आफैंले बिजुली गाडी प्रवर्द्धन गर्ने र अहिले सार्वजनिक यातायातमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई पनि पुराना गाडी थन्क्याएर बिजुली गाडी किन्न प्रोत्साहन गर्ने उनको योजना छ।
यसमा चुनौती भनेको न्यूरोड आउने व्यवसायी र उपभोक्ताहरूले आफ्नो गाडी कहाँ राख्ने भन्ने हो। त्यसका लागि उनले सबभन्दा पहिला पार्किङको समस्या हल गर्नुपर्छ। धरहराको मुनि, जसलाई बालेन धरहरा होइन, 'सेतो टावर' भन्न रूचाउँछन्, त्यहाँ पनि करिब हजारवटा गाडी र मोटरसाइकल राख्ने क्षमताको पार्किङ बन्दैछ। त्यो निर्माण पूरा भएपछि न्यूरोडलाई सवारी निषेधित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ।
हाम्रो यो प्रश्नमा बालेनले र्‍याप ब्याटलकै शैलीमा प्रतिप्रश्न गरे, 'तपाईंले महानगरको कर्मचारीतन्त्रसँग काम गर्नुभएको छ?'
'छैन भने तपाईं अरूको धारणाअनुसार आफ्नो धारणा बनाएर मलाई प्रश्न गर्दै हुनु हुन्छ,' बालेनले भने, 'महानगरमा मेयर नै कार्यकारी हो। उसले सबैसँग मिलेर र सबैले ऊसँग मिलेर काम गर्ने हो। मलाई असफल बनाउनु भनेको वडाध्यक्षहरू आफैं असफल हुनु होइन र?'
उनले अगाडि भने, 'मैले अहिलेदेखि नै निर्वाचित भएर आएका वडाध्यक्षहरूले मलाई काम गर्न दिँदैनन् भनेर शंका गर्न थालेँ भने त म अहिल्यै असफल भइहालेँ नि। म मात्र होइन, उहाँहरू पनि र मलाई निर्वाचित गरेर पठाउने सबै मतदाता असफल भइहाले नि। सिंगो काठमाडौं महानगर नै असफल भइहाल्यो नि। मैले त उहाँहरू सबैसँग मिलेर काम गर्ने हो र मलाई विश्वास छ, उहाँहरू पनि मसँग मिलेरै काम गर्नु हुनेछ।'
'जहाँसम्म कर्मचारीतन्त्रप्रतिको शंका छ, त्यसमा मलाई बिल्कुल विश्वास छैन। मेयर आफैं भ्रष्टाचारी छ भने एउटा कुरा, नभए स्वच्छ छवि भएको मान्छे पर्‍यो भने कर्मचारीहरूले त्यसै सहयोग गर्छन्।'
उनले यो पनि भने, 'मैले काठमाडौं महानगरबाटै हजार वटाभन्दा बढी घरका नक्सा पास गरेको छु। वर्षौंदेखि उनीहरूसँग सहकार्यमा काम गर्दै आएको छु। झन् आफूले पहिल्यैदेखि चिनेको मान्छे मेयर भयो भनेर उहाँहरूले पूर्ण सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।'
'राजनीतिमा तपाईंको भविष्यको योजना के हो?'
उनले प्रश्न झर्न नपाउँदै भने, 'तपाईं जेलाई राजनीति भन्नुहुन्छ, म विकास भन्छु। म विकासकै काम गर्नेछु।'
हामीले उनलाई सोध्यौं- काठमाडौंको मेयरमा दोहोर्‍याएर लड्नु हुन्छ? कुनै दिन सांसद लड्ने योजना छ?
उनले खुलेर जवाफ दिएनन्। यति मात्र भने, 'मेयरमा उत्तराधिकारीको विकास गरिहाल्ने हो। काम गर्दागर्दै अर्को मान्छे तयार गर्ने हो।'
हामीले फेरि सोध्यौं, 'तपाईं स्वतन्त्र नै रहने कि कुनै दिन कुनै मुख्य दलमा प्रवेश गरेर काम गर्ने?'
प्रश्न झर्न नपाउँदै उनले केही झोक्किएझैं प्रतिवाद गरे, 'म भविष्यमा कुनै दलमा छिर्ने छैन।'
हामीले त्यसैमा जोडेर अर्को प्रश्न सोध्यौं, 'राजनीतिमै बस्ने तर अर्को दल नछिर्ने भनेपछि नयाँ पार्टी खोल्ने?'
उनले कुनै जवाफ दिएनन्। तर आँखा र उनको हाउभाउमा जवाफ प्रस्ट थियो, 'हो, नयाँ दल खोल्ने हो।'
आफ्नो जातीय परिचयबारे उठेको प्रश्नमा उनले भने, 'मैले कहिल्यै पनि मेरो नामसँग जातीय परिचय जोड्न चाहिनँ। जनताले पनि मेरो जातीय परिचयमाथि कहिल्यै सवाल उठाएनन्। केशव स्थापितजीले म मधेसको हो भनेर भनेपछि मात्र यो कुरा उठेको हो। त्यसपछि धेरैले मलाई मधेसको तेली साह भने। मैले खुसी खुसी स्वीकारेँ। कतिले जुम्लाको ठकुरी भने, त्यो पनि मैले खुसी खुसी स्वीकारेँ।'
उनले यसलाई अझ स्पस्ट पार्दै भने, 'म मधेसको तेली साह होइन। जुम्लाको ठकुरी शाह पनि होइन। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रजस्तो शाह पनि होइन। म सूर्यवंशी राजपरिवारको सन्तान हुँ। प्योर राजाको छोरा हुँ।'
'तपाईंले सूर्यवंशी राजपरिवारको सन्तान हुँ त भन्नुभयो तर यो कुरा कसरी थाहा पाउनुभयो?'
हाम्रो यो प्रश्नमा उनले भने, 'त्यो त हाम्रो वंशावलीमै छ।'
'के तपाईंहरूको इतिहास सिम्रौनगढसँग जोडिन्छ?'
उनले भने, 'सिम्रौनगढभन्दा पुरानो। त्यहाँका राजा हरिसिंह देवभन्दा पुरानो। हाम्रो राज्यमा मिथिला, हेटौंडा, काठमाडौंसहित यहाँका धेरै ठाउँ पर्थे।'
बालेनले पूरा आत्मविश्वासका साथ यसो भन्दै गर्दा हामीले उनको वंशावलीबारे थप जान्न चाह्यौं। उनले भने, 'त्यो त धेरै अगाडिदेखिको छ। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिको।'
काठमाडौंका 'मेयर इन वेटिङ' बालेन शाहसँगको कुराकानीबाट कति प्रश्न खुले, कति अनुत्तरितै रहे। खासगरी उनको चुनावी तयारीसँग जोडिएका धेरै पहलू सामुन्ने आए। उनको व्यक्तित्वबारे भने अझै धेरै जान्न बाँकी रह्यो जुन उनले कार्यभार सम्हालेसँग खुल्दै जाने नै छ।
आखिर मान्छे सबै देखिने दृश्य र नदेखिने रहस्यको मिसमासले नै बनेका हुन्छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ११, २०७९, ११:०६:००